Ummulida | Zanzu
Muddada ummulista dabiiciga ah ilmaha waxa uu ka dhashaa siilka hooyadii, Celcelis ahaan ummulistu waxay qaadataa inta u dhexaysa 10 iyo 12 saacadood ilmaha u horeeya. Ummulida 2aad guud ahaan waxay gaadhaa wakhti ka yar.
Ka hor inta aanu dhalan ilmahu, hooyadu waxay leedahay isku soo ururka Muruqyada ilma galeenka way isku soo ururaan: Wac ummulisada marka aad leedahay isku soo ururka muruqyada, ama marka aad werwersantahay.
Ummulida dabiiciga ah: haweenay dhalaysa ilmaheeda.
Isku soo ururka
Isku soo ururku waxa uu furaa afka ilma galeenka (albaabka ilma galeenka). Marka afka ilma galeenku si ballaadhan u furmo oo ku filan, waxaad diyaar u tahay inaad ummulisho.
Si loo yareeryo xanuunka muddada isku soo ururka waxaad kartaa:
aad isticmaasho farsamooyinka neefsashada;
qubaysato ama tuush gasho si aad u nefisto;
hesho caawimo sida barkimo kulul ama kursi kubbad ah;
waydii xanuun baabiiye ah qaabka bamka PCA ama mudditaan, dhabarka hoose, haddii aad ku ummusho cusbitaalka ama xarunta dhalmada. Mudditaanka waxaa la siin karaa marka aad fadhido ama aad jiifto.
Haweenka leh isku soo ururka.
Haweenay uur leh oo taagan. Xoog saaridu waa xubnaha taranka gudaha oo leh uur jiifka ku jira gudaha makaanka.
Isku soo ururku waxa uu ka dhigaa afka ilma galeenka, albaabka ilma galeenka inuu kala furmo.
Afka ilma galeenku si ballaadhan ayuu u furanyahay.
Marka afka ilma galeenku si ballaadhan oo ku filan u furanyahay, ilma yar waa uu dhalan karaa.
Dhakhtar ku muddaya dawada suuxinta dhabarka: mudditaan qaybta hoose ee dhabarka si ay u fudaydiso xanuunka muddada isku soo ururka.
Waxaad kala hadashaa ummulisadaada meesha aad jeclaan lahayd inaad ku ummusho. Gudaha Netherlands waxaad dooran kartaa haddii aad doonayso inay ummulisadu kaaga ummuliso gurigaaga, gudaha cusbitaalka ama xarunta dhalmada. Haddii dhakhtarka haweenku la socdo uurkaaga, had iyo jeer waxaad ku ummushaa gudaha cusbitaalka.
Muddada ummulida, lamaanahaaga ama qof kale oo aad doorato ayaa kula joogi kara.
Ummulisada iyo /ama kaaliyaha hooyada way ku hagaan adiga muddada isku soo ururka.
Ummulisada sidoo kale waxay baadhaa garaaca wadnaha ilmaha oo waxa uu sameeyaa baadhitaan gudaha si uu u dareemo haddii afka ilma galeenku uu si ballaadhan oo ku filan u furanyahay. Haddii afka ilmagaleenku uu si buuxda u furanyahay waxaad bilaabi kartaa riixida.
Intabadan, halka u dhexayso farjiga iyo siilka way dilaacdaa marka madaxiisu soo baxo. Ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka ayaa toli doono.
Ilmahu waxa uu ka soo baxaa siilka. Xadhigii xuduntu waa la jaray.
10 ilaa 30 daqiiqadood, mandheertu waxay ka baxdaa jidhkaaga.
Aabbaha jaraya xadhiga xudunta ee ilmaha.
Mandheerta ka baxaysa jidhka haweenayda, 10 ilaa 30 daqiiqadood ka dib ummulida.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Ummulida
Calaamadaha ummulida soo socota